Tsy ho may intsony ny olona erzincan any amin'ny biraon'ny bus | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra atsinanan'i Anatolia24 ErzincanTsy mandehandeha amin'ny fijanonan'ny fiara fitaterana intsony ireo mponina ao Erzincan
11 / 02 / 2020 24 Erzincan, Faritra atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, TORKIA
tsy hiasa amin'ny fijanonan'ny fiara fitaterana intsony i erzincanli
Ny fijanonan'ny kaompanian'i Erzincan no nanamboarana ny fijanonana ho an'ny fiaramanidina efa nomanina tao amin'ny Kaominina Erzincan.
Ny fijanonan'ny fiara fitaterana vaovao natao teo amin'ny lalana Halit Pasha dia nampidirina. Manintona ny saina avy amin'ny olom-pirenena ny fijanonan'ny rivotra. Ny ben'ny tanàna Erzincan Bekir Aksun, miaraka amin'ny Solombavambahoaka lefitra ary mpikambana ao amin'ny filankevitra MHP dia nandinika ny fijanonana vaovao. Ny Filoha Aksun, tao anaty fanambarana tamin'ny mpanao gazety, dia nilaza hoe: “Nanao fampanantenana toy izany ho an'ny olom-pirenena izahay talohan'ny fifidianana. Nilaza ny firenentsika fa tokony hijanona eto Erzincan ny fijanonan'ny rivotra. Nahita toerana toy izany tamin'ny andro ririnina mangatsiaka izahay dia nahatsapa fa misy filàna ilaina indrindra ho an'ny vehivavy sy ny antitra ary ireo mpianatra. Namoahanay ireo fampanantenana ireo alohan'ny fifidianana, ary ankehitriny faly be izahay fa faly izahay eto.
HITOMPOANA INDRINDRA 6
Hita any amin'ny distrika 6 ao afovoan-tanàna izany izy io. Misy ny eritreritra fa aloha loatra tany amin'ireo faritra ivelan'ny afovoan-tanàna mba hiparitaka eo anelanelan'ny manodidina ka tsy azo ampiasaina amin'ny tanjona hafa. Nahavita fijanonana 50 metatra tora-kovitra izahay hatramin'izao, izay mitentina 750 XNUMX TL. Izahay dia nanao fifanarahana nifanarahana tamin'ny City Light. Ny jiro an-tanan-dehibe no nahatonga an'io fijanonana io, ho setrin'ny takelaka maromaro no nomenay azy ireo. Ho an'ity tetik'asa ity, tsy misy tetibola ao amin'ny tranobe mpahazo ny monisipaly.
Ireo mpianatra izay nampiatoana dia naneho ny fisaorana an'i Mayor Bekir Aksun noho ity tolotra ity. Etsy ankilan'izany dia voalaza fa hijanona eo amin'ny serivisy mandritra ny 7 ora ka hatramin'ny 11 maraina ny fijanonan'ny rivotra.
Fanazavana avy amin'ny BURULAŞ; "Tsy hangatsiaka intsony ny ankizy"
Kocaeli Nianjera tamin'ny hazo, nogadraina
Fever Miasa ao amin'ny bus station Salihli
Fiaramanidina Flyer amin'ny toerana fiarabana
Konyalılar Skiing any Aladağ
Mampitombo ny fandefan'ny mpandeha an-dalamby ny fitambaran-trano
Mihazakazaka ny fisokafana ankehitriny ao Kocaeli
Ny isan'ny isan'ny bisikileta mitombo any Sakarya
Ny isan'ny fiara fitomboana dia nitombo tao Hani, lalana vaovao voatondro any Tigris
Ny fiantsenan'ny bus dia nampitombo ny mpianatra hiditra ny YKS ao Karaman
Avcılar-Beylikdüzü ny tsipika metrobus dia tapitra fa ny korontana any Avcılar dia tsy vita
Fijanonan'ny rivotra no nihidy tao Erzincan